Fivondronamben'ny Federasiona Ranomasimbe Indiana - ss 3t l0412 lah
Vavaka fisaorana (1Tes 1 : 1-3)
Alahady 22 Jolay
Hitantsika taratra ao amin’ny teny fanokafana ny 1 Tesalônianina fa tsy nisy fitiavan-tena tao amin’i Paoly. Na dia mazava tsara aza fa izy no mpanoratra izany taratasy izany (1Tes. 2:18, 3:5, 5:27), dia nasehony tsara kosa ny fankasitrahany an’i Silasy sy i Timoty mpiara-miasa taminy.
Vakio ny 1 Tes. 1:1-3. Inona avy ireo zavatra nahatonga an’i Paoly sy i Silasy ary i Timoty ho feno fisaorana? Inona no hevitra mahasoa tian’ireo zavatra ireo hambara? Izany hoe, ahoana ny mety ho fomba fisehon’izy ireo eo amin’ny fiainana andavanandro? Ohatra, manao ahoana ny fisehon’ny “asan’ny finoana” eo amin’ny fiainantsika?
Manaraka ny rafitra mampiavaka ny taratasy grika fahiny ny fanombohana io taratasy io, saingy narahina fiovana kely mahaliana. Ampian’i Paoly ilay fiarahabana jiosy mahazatra hoe “fiadanana” (shalom amin’ny teny hebreo) mantsy ny teny fanokafana mampiavaka ny taratasy grika hoe “fahasoavana”, izay hita eto. Ny “fahasoavana” sy ny “fiadanana”, dia samy fanehoana araka ny tokony ho izy avokoa izay mety ho fanandramana miaraka amin’i Jesôsy.
Iza moa i Silvanus? Amin’ny fiteny latinina io anarana io ary mifanandrify amin’ilay anarana arameanina hoe “Silas”. Mazàna ireo Jiosy nonina tany ivelan’i Palestinina no nampiaraka ny anarana maha-Jiosy azy tamin’ny anarana grika na latinina (izany no nahatonga ny “Saoly” ho lasa “Paoly”). Kristianina tao Jerosalema tahaka an’i Marka ihany i Silasy, ary anisan’ireo mpiara-miasa voalohany niara nandeha lavitra tamin’i Paoly izy. Nametraka ny fitokisany tamin’ireo mpitarika ny fiangonana tao Jerosalema i Paoly raha navelany hiara-manatontosa aminy ny dia misiônera izay nataony izy ireo, ary tamin’izany no nanaovany ny ezaka lehibe indrindra hihazonana ny firaisana teo amin’ny fiangonana.
Inona avy ireo andian-teny hita ao amin’ny 1 Tes. 1:1-3, izay nanjary fanta-daza noho ny fomba nampiasana azy tao amin’ny 1 Kôr. 13? Iza amin’izy ireo no tena voantitrantitra voalohany indrindra ao amin’ny 1 Kôrintianina, ary inona no antony?
Ny zava-misy marina fa tsy ny fiainana ara-panahy maivamaivana no ifantohan’i Paoly ao amin’ny vavaka nataony. Mitarika hanao asa matotra ny finoana. Mahatonga ny tena hikely aina ny tena fitiavana marina. Ny fanantenana kosa dia mitaky faharetana betsaka. Asa fa tsy foto-kevitra manjavozavo no tena antitranterina ao amin’ireo teny ireo. Miovaova ny filaharan’ny finoana sy ny fitiavana ary ny fanantenana ao amin’ny Testamenta Vaovao, saingy any amin’ny farany hatrany no misy ny manandanja indrindra amin’izy telo (jereo ny 1 Kôr. 13:13). Ny filaharana hita ao amin’ny and.3 dia manasongadina ny maha-zava-dehibe, ao an-tsain’i Paoly, ireo toe-javatra hiseho amin’ny andro farany, izay hita manerana ireo taratasy anankiroa nosoratany ho an’ny Tesalônianina.
Velom-pisaorana an’Andriamanitra ihany koa i Paoly satria tsaroany ny fomba nandraisan’ny Tesalônianina ny filazantsara. Azo antoka ihany koa fa nanantena i Paoly hoe ny fifalian’izy ireo vokatry ny dera natolotr’i Paoly azy ireo dia hanomana azy ireo bebe kokoa ho amin’ny fahasahiranan-tsaina izay hambaran’i Paoly amin’izy ireo tsy ho ela.